शीर्षकमा बाइबल पदहरू: ट्याटूहरू -> थप
१ कोरिन्थी ६:१८-२०
 व्‍यभिचारलाई त्‍याग। अरू पाप मानिसले आफ्‍नो शरीरदेखि बाहिर गर्दछ, तर व्‍यभिचार गर्नेले आफ्‍नै शरीरको विरुद्ध पाप गर्दछ। के तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्‍माको मन्‍दिर हो भनी तिमीहरूलाई थाहा छैन? परमेश्‍वरले दिनुभएको पवित्र आत्‍मा नै तिमीहरूको शरीरभित्र बस्‍नुहुन्‍छ। त्‍यसो हुँदा तिमीहरू आफैं पनि आफ्‍ना होइनौ। तिमीहरूलाई परमेश्‍वरले मोल तिरेर किन्‍नुभएको हो। यसकारण तिमीहरूले आफ्‍नो शरीरले परमेश्‍वरको आदर गर।
१ कोरिन्थी 10:23-31
 तिमी भन्‍छौ, “सबै थोक गर्नुहुन्‍छ।” हो, तर सबै कुराले भलो गर्दैन। “हामीले सब कुरा गर्न पाउँछौं,” भन्‍छौं। ठीक हो, तर सबै कुराले हामीलाई फाइदा गर्दैन। कसैले पनि आफ्‍नो भलाइ होइन तर अरूको भलाइ खोजोस्। विवेकको लागि केही नसोची तिमीहरू मासुको बजारबाट किनेर जे पनि खान सक्‍छौ किनभने धर्मशास्‍त्र भन्‍छ, “पृथ्‍वी र यसमा भएका सबै थोक परमेश्‍वरका हुन्,।” यदि प्रभुमा विश्‍वास नगर्ने कसैले तिमीहरूलाई खाना बोलाउँछन् भने तिमीलाई जान मन लागे जाओ, तर विवेकको लागि जे दिए पनि नसोधीकन खाओ। तर कसैले ‘यो त मूर्तिमा चढाएको खानेकुरा हो’ भन्‍छ भने त्‍यस भन्‍ने मानिसको लागि र विवेकको लागि नखाओ। मैले भनेको तिम्रै विवेकको लागि होइन, तर त्‍यो भन्‍ने मानिसको विवेकको लागि हो। तिमीहरू भन्‍छौ होला, अर्काको विवेकले मेरो स्‍वतन्‍त्रतालाई किन बाँध्‍नु? यदि म धन्‍यवाद दिएर खान्‍छु भने धन्‍यवाद दिएर खाएको कुरामा किन अर्काले दोष लाउने? खाने-पिउने जे गरे पनि परमेश्‍वरकै आदरको लागि गर। यस किसिमले जीवन जिउने गर।
प्रभुलाई मनपर्ने कुरो के हो, बुझ।
१ कोरिन्थी ३:१६-१७